Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Entertainment » Mmekọahụ efu na njegharị obodo
Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • News • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Ịzụ ahịa • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Chere. Nke ahụ ekwesịrị ịgụ Mmekọahụ efu na njegharị obodo? Nke ahụ ọ́ gaghị abụ ihe ziri ezi na ụtọasụsụ? N'ezie ọ ga -adị, mana ọ ga -abụ ihe na -ezighi ezi maka njegharị ndị anyị na -aga ịgagharị. Anyị chọrọ ileta Mmekọahụ NA obodo.
Kedu onye na -anaghị echeta ụlọ Carrie ya na kaboodu mara mma?
Ma ọ bụ ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ Manolo Blahniks nke jidere anya ya karịa otu ugboro ka ọ na -aga ma na -ekwu okwu. Cheta ahịrị ahụ ama ama, “Ndewo, onye hụrụ m n'anya” mgbe ọ naghị ekwu maka nwoke?
Mgbe ahụ enwere Meatpacking District ebe Samantha na -eji akwa transvestites 3 abanye n'ime akwa.
Maka ndị na -anụ ọkụ n'obi na -egosi ihe nkiri TV "Mmekọahụ na Obodo", enwere ọtụtụ ncheta gburugburu New York City ebe akụkọ a mere na ndị isi Carrie, Samantha, Miranda na Charlotte. Site na ebe kachasị amasị ha ka ha zukọta maka nri na mkpakọrịta, ruo ụzọ ọkacha mmasị Charlotte na Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir, gaa n'ụlọ mmanya Steve nke ọ kpọrọ aha nkịta ya, ruo ọtụtụ ebe ha zutere maka ihe ọ drinksụ drinksụ, NYC bụ Mmekọahụ na Obodo hotbed, enweghị pun zubere.
N'ezie, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka njem nwoke na nwanyị na njegharị obodo - site na bọs dịka ọmụmaatụ, mana gịnị kpatara na ị gaghị eji oge nke gị soro ndị nke gị njegharị onwe onye na-eduzi n'efu?
Nke a bụ ụfọdụ ebe ama ama a na-egosi na TV nke ị nwere ike chọọ banye maka ịta, rie ma ọ bụ lelee anya.
Manolo blahnik na 31 W 54th Street
Carrie gafere ụlọ ahịa akpụkpọ ụkwụ Manolo Blahnik n'ihe karịrị otu oge n'oge usoro ihe nkiri TV. Otu ihe omume ọkachasị bụ mgbe ọ chọpụtara na ọ nọrọla $ 40,000 na akpụkpọ ụkwụ naanị - ego ọ chọrọ ugbu a iji zụta ụlọ ya.
Ụlọ ụgbọ mmiri Loeb
Cheta mgbe Carrie na Maazị Big dabara na mmiri n'ụlọ oriri na ọ Parkụ Centralụ Central Park a? Ha agbasasịla mana ha kpebiri izukọ maka nri ehihie iji nwute. Mgbe Miranda dọrọ ya aka na ntị na ọ kaara ya mma isutụ ya ọnụ, mgbe Maazị Big dabere na nke ahụ, Carrie weghachiri azụ na mmiri wee bute ya.
Ụlọ oriri na ọ Marinụ Daụ Da Marino na 220 W 49th Street
N'ikwu okwu banyere Carrie na Nnukwu ụlọ nri, kedu maka Da Marino mgbe ha ga -alọta ọzọ na mgbe ha na -eri nri abalị n'ụlọ nri Italiantali mara mma, ebe Carrie na -amụta na ọ na -adị mgbe niile ka onye nwe ya na -abịa na -ekele ha. Mgbe ahụ Big na -eme mkpọtụ ka ọ na -abụ abụ "Mgbe m dị afọ iri na asaa," Carrie fọrọ nke nta ka ọ gbasaa mmanya ya.
Ihe ọchị St. Mark na 11th Street
Ọ dị mma, ka anyị pụọ na Carrie na Big ruo nwa oge wee laghachi n'ụlọ ahịa St Mark's Comics. Nke a bụ ebe ọ zutere Wade - nwa okorobịa na -enweghị nlekọta n'ụwa (onye ya na nne na nna ya ka nọ) ihe tụrụ Carrie n'anya mgbe nne ya batara mgbe ha abụọ riri wii wii ma na -ata ụta na Carrie. Ọ na -eso ya wee were ahịhịa ya na -eduga na ihe nkiri ọzọ na -atọ ọchị n'ụlọ Carrie mgbe ya na Samantha, Charlotte na Miranda na -ekerịta ya, na mgbe ejidere ya maka ị smokingụ ya n'ihu ọha, Carrie ji obi ụtọ kwupụta ụbọchị ahụ dị ka nke ahụ mgbe ejidere ya maka ị smokingụ doobie.
Ụlọ nri Magnolia na 401 Bleecker Street
Nke a nwere ike ọ gaghị abụ ebe a na -agaghị echefu echefu nke Carrie na Miranda na -ekerịta cupcakes ka ha na -emekọrịta mmekọrịta, mana ebe a na -eme achịcha a ghọrọ onye ama ama n'ụwa n'ihi nri a na -ekerịta. M na -ekwukwa onye na -achọghị ihe kpatara ị ga -eji banye n'ime bred maka ọgwụgwọ?
Igbe Obi .tọ na 156th na 7th Avenue S
Nke na -eduga anyị na ọgwụgwọ nke jidere Charlotte nke ukwuu nke na a ga -etinye aka na ihe omume mgbe a napụrụ ya oke bekee ya, nke ọ zụtara na obere ụlọ ahịa sexy a, ka ọ wee laghachi na ndụ kwa ụbọchị wee chọta ya. ihe mere ị ga -eji hapụ ụlọ ya ọzọ.
Ogige Ahịa Jefferson n'etiti 6th Avenue na W 10th Street
N'ịga n'ihu n'ihe ndị ọzọ dị ebube, kedu maka ọmarịcha ogige obodo ebe Miranda na Steve kpebiri ịlụ? O kpebisiri ike ịchọta ebe “na-adịghị egbu egbu,” wee mee ya mgbe akpa nri ya dara n'ihu ọnụ ụzọ ogige. Ihe ịrịba ama doro anya na anyị ga -asị na nke a bụ ebe ahụ.
Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis na Sarah Jessica Parker (Foto nke Bill Davila/FilmMagic sere)
Hotel Plaza na 5th Avenue na 59th Street
N'ezie, njem ọ bụla ị ga-aga NYC kwesịrị ịgụnye opekata mpe njem n'ọnụ ụlọ dị na Hotel Plaza, ọ bụghị ya? Ee, enwere ebe a kwa, mgbe Carrie na Big kwurịtara okwu mgbe ya na Natasha gachara oriri - onye ọ kpọrọ osisi enweghị mkpụrụ obi. Na ihe nkiri a, ọ na-emegharị ihe nkiri ọzọ “Otu anyị siri dị,” mgbe o jiri mkpịsị aka ya hichaa ntutu isi wee sị, "Nwa gị nwanyị mara mma, Hubble."
Na enwere ọtụtụ ebe ndị ọzọ inyocha - Samovar Russia na 256 W 52nd Okporo ụzọ ebe Carrie na -eso ụbọchị mbụ ya na “onye Russia,” nke Mikhail Barishnykov na -egwu, yana isi iyi Columbus Circle na 59th Street na 8th Avenue ebe Carrie na -agbaji. Obi Aidan nke ugboro abụọ na maka ịdị mma.
Mgbe ahụ enwere ngalaba ụlọ akwụkwọ ọhaneze New York City na 5th Avenue na 42nd Street ebe Carrie na Big kwesịrị ịlụ (isi okwu ekwesịrị). Na ụlọ ebe Carrie na Big chọtara ụlọ ha NYC ebe ha kwesiri (enwere okwu ndị ahụ ọzọ) na -ebi mgbe agbamakwụkwọ na 1010 Fifth Avenue. Oh mba, chere. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe nkiri mgbe ihe onyonyo telivishọn gasịrị. Mana nke ahụ bụ ndepụta ịwụ ọzọ ebe aga eleta.